Shumaca Shumaca Dhalooyinka Shumaca Maraakiibta Shumaca Jumlada leh Warshadaynta Daboolka iyo Warshadda | Maya
Muraayadaha Shumaca Weelasha Shumaca Maraakiibta Jumlada Daboolka leh
Awoodda: 220ml/7.5oz, 320ml/11oz
Midabka La Heli Karo: Barafoobay/Cagaar/Pink/Buluug/Maariin/Midab
Daboollada La Heli Karo: Daboolka alwaax, Qalin / Dahab / Rose Dahabka Dahabka Dahabka ah
Kordhinta: Daabacaadda Logo, Ku Xardh Daboollada, Istiikarada/Calaamadda, Sanduuqa Xidhmada
Dhalooyinka shumacayagu aad bay ugu habboon yihiin dhammaan shumacyada guriga lagu sameeyo, ha ahaadeen shumacyada soy, shumacyada codka ama shumacyada shinnida. Shirkado badan oo Yurub ku yaal ayaa adeegsada laambadahaan tayada sare leh si ay u abuuraan muuqaal raaxo leh iyo dareemo. Sababtoo ah nolosha gubashada dheer, weelashaan shumaca madhan waxay siin karaan qolof qaar ka mid ah saliidaha lagama maarmaanka ah ee muhiimka ah. Haddii aad rabto inaad ka takhalusto qaabka shumaca dhaqameedka Yankee, kani wuxuu kuu noqon karaa weelka shumaca.
Marka laga hadlayo weelka shumaca galaaska barafoobay, waxaan leenahay cabbirro kale oo badan oo aan ka dooran karno. Sababtoo ah sifooyinkooda kuleylka u adkaysta, dhalooyinkaan ayaa aad ugu habboon samaynta shumacyada. Waxay si fiican ugu buuxsan yihiin sanduuq maraakiib oo si fiican loo qorsheeyey, weel kastaa wuxuu leeyahay qol, waxaana agtiisa ka buuxa buuxin ku filan. Cabbirka, astaanta, iyo midabka dhammaantood waa la beddeli karaa, waxaana hubaal ah inaan awoodno inaan ku siino tayo aad u wanaagsan, qiimayaal la awoodi karo iyo adeegga iibinta dabaqadda koowaad. Midabka, urta, astaanta iyo baakadaha dhammaantood waa la beddeli karaa!
Ugu horrayn, alaabtayadu waxay haystaan ​​shahaadooyin tayo oo dhammaystiran. Dhalooyinka shumacayagu waxay si buuxda ugu hoggaansamaan heerarka Yurub, markaa uma baahnid inaad ka walwasho tayada shumacyadeenna. Dhalooyinkayaga shumaca waxaa loo dhoofiyaa daraasiin dalal iyo gobollo ku yaal Mareykanka, Kanada, Yurub, Koonfur -bari Aasiya, iwm, macaamiishana aad bay u soo dhaweeyaan. Dadka haysta shumaca galaaska ah waxay ka samaysan yihiin alaab ceyriin oo bey'ada u fiican oo tayo leh, kuwaas oo hubaal ah inaysan ahayn galaas ka liita oo aan waxyeello u geysan doonin dadka.
Marka labaad, weelka shumaca muraayadda waxaa loo habeyn karaa saameyno kala duwan, sida matte, barafoobay, la safeeyey oo la buufiyey. Waxaad dooran kartaa saamaynta aad jeceshahay. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku daabacdo astaantaada ama astaantaada dhalada, annaguna waan daabici karnaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad noo soo dirto nashqaddaada, oo waxaan kuu samayn karnaa wax kuu tarjumaya. Intaa waxaa dheer, waxaad u dooran kartaa daboollo kala duwan alaabtaada, waxaan leenahay daboollo baasaboor, daboolno alwaax ah, iyo daboollo bir ah.
Marka la eego baakadaha, waxaan u isticmaalnaa bacaha xumbo hawada si aan ugu duubno dhalooyinka shumaca muraayadda si aan uga fogaano waxyeello inta lagu jiro gaadiidka. Waxaan ilaalin doonnaa badeecadaha illaa iyo inta ugu badan waxaanna ka dhigi doonnaa badeecadaha kuwo si ammaan ah loo gaarsiiyo macaamiisha. Haddii aad wax dhibaato ah ka qabto badeecada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
1) LIDS- Sii weelka shumacaaga muuqaal qurux badan oo leh daboolladayada baasaboorka. Daboollada baasaboorkaan waxay si gaar ah u eegaan samaynta shumacaaga. Waxaa ku jira qalab silikoon oo gudaha ah si ay gacan uga geysato daboolidda weelka
2) ADEEGYADA KUleylka - Dhalooyinkaan ma jabi doonaan mana dillaaci doonaan marka ay joogaan heerkul sare, taas oo ka dhigaysa xulasho aad u fiican samaynta shumaca.
3) Qaabab badan —— Marka loo eego mowduucyada iyo qaababka kala duwan, waxaan ugu talagalnay midabyo iyo cabbirro badan oo kala duwan daasadda shumaca, sida matte madow, matte hufan, caddaan, casaan, buluug, iwm Waxaad had iyo jeer heli kartaa mid aad jeceshahay.
4) Qurxinta iyo Dhaqanka Quruxda badan: Shumacyadan kala duwan ee codbixinta waxaa loo adeegsan karaa siyaabo badan oo kala duwan laga bilaabo aroosyada, qurxinta guriga, qurxinta xafladda dibadda, maqaayadaha, jawiga jaceylka, qurxinta DIY, maalmaha dhalashada iyo waxyaabo kaloo badan. Waxayna u fiican tahay isticmaalka degdegga ah ee korontada ka go'day.
Cabbirka guud, hal gacan
Midabo kala duwan oo dabool biraha ah iyo daboolno alwaax ah
Qalab muraayad ah oo hufan
Calaamadaha gaarka ah iyo sanduuqyada wax lagu duubo
Hore: Caagadaha dhalooyinka oo leh Fiilooyinka Aluminiumka ah ee ka Furan Furayaasha iyo Istarooyinka Rubber -ka
Xiga: Dhalooyinka Reed Diffuser Dhalada Jumlada Cad ee Opal Glass Dhalo Diffuser Oo Ul leh
8 oz dhalooyinka shumaca
maraakiibta shumaca jumlada
dhalooyinka shumaca madhan
dhalooyinka shumaca barafoobay
dhalooyinka shumaca galaaska
Qurxinta Glass Weelasha White Opal Glass Gott ...
Dhalooyinka Oil Dhalo Glass Dropper Dhalo Whol ...
Dhalooyinka Khamriga Glass Iyadoo Corks Glass Bo Bo ...